टेक्सास होल्डम हात - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » टेक्सास होल्डम » टेक्सास होल्डम हात
शीर्ष पोकर हातहरू, उच्चतमदेखि न्यूनतमसम्म क्रमबद्ध
टेक्सास होल्ड’ममा शीर्ष सुरु हुने हातहरू
पोकर हातहरूको बारेमा सामान्य प्रश्नहरू
पोकरको खेलमा हातहरूको मूल्यले कसले खेल जित्ने निर्णय गर्दछ। त्यसोभए यदि तपाईं भाँडो जित्न चाहानुहुन्छ र अन्य खेलाडीहरू लाई प्रभावित पार्नुहुन्छ, त्यसोभए तपाईंले पोकर हातको श्रेणीकरण थाहा पाउनुपर्दछ।
यस गाईडमा, हामी तपाईंलाई शीर्ष १० पोकर संयोजनहरू मार्फत मार्गदर्शन गर्दछौं जुन तपाईंले भाँडोमा लिने अधिकार कमाउन सक्नुहुन्छ।
रोयल फ्लश । यो उत्तम हात हो जुन तपाईं यस कार्ड खेलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं एक विजयी कम्बो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ १०, ज्याक, क्वीन, किंग, र Ace, सबै समान सूटबाट।
सीधा फ्लश । तपाईंसँग प row्क्तिमा पाँचवटा कार्डहरू छन्, सबै समान सूटबाट आउँदैछन्।
एक प्रकारको चार । तपाईंसँग s एस जस्तै कार्ड छ चार सूटको प्रत्येकबाट।
पूर्ण घर। पूर्ण डुat्गाका रूपमा पनि परिचित, यो एक प्रकारको जोडी प्लस तीनको रूपमा आउँदछ।
फ्लश । यो जित्ने कम्बो सबै एक सूटबाट पाँचवटा कार्डको साथ आउँदछ, र संख्यात्मक क्रममा होइन।
सीधा यो हातले संख्यात्मक क्रममा पाँचवटा कार्डहरू राख्नेछ, र आवश्यक रूपमा उही सूटबाट आउँदैन।
एक प्रकारको तीन । यसलाई सेट वा ट्रिप्स पनि भनिन्छ, जुन तीन मध्ये एक कार्डलाई दर्साउँछ, र दुई गैर-जोडी कार्डहरू।
दुई जोडी। तपाईंसँग एक हातमा समान कार्डको दुई फरक जोडीहरू छन्, भन्नुहोस् २ एसेस र २ क्वीन्स।
एक जोडी । अन्य तीन मिल्दो कार्डहरूसँग समान कार्डको पेयरि।।
उच्च कार्ड। हातले मिल्दो कार्डहरू प्रदर्शन गर्दैन, लगातार क्रममा होईन र विभिन्न सूटबाट आउँदछ।
तल सूचीबद्ध शीर्ष १० सुरू हातहरू जुन तपाईं पोकरको खेलमा अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
पकेट Aces। यो एक क्लासिक हात हो र उत्साहीहरूले यसलाई सबभन्दा बलियो सुरूवात मान्दछ जुन तपाईं खेलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको Ace of Hearts and Spade को बारेमा व्यवहार गर्न सकिन्छ प्रत्येक २२१ हातमा एक पटक, र यदि यो हुन्छ भने, तपाई लगभग hand: १ मनपर्दो हुनुहुन्छ कुनै पनि हात जित्नु। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि तपाईंको भाँडो जित्ने सम्भावनाहरू खेलमा अधिक खेलाडीहरूको साथ कम हुनेछ।
पकेट किंग यिनीहरू पोकर सर्किटमा ‘काउबॉय’ भनेर चिनिन्छन् र Aces को छेउमा हात मनपर्ने मानिन्छ।
पकेट क्वीन्स। यदि तपाईंलाई २ क्वीन्स तोकिएको छ भने, तपाईलाई यो आश्वासन दिन सकिन्छ कि केवल आठ ओभरकार्डहरू बाँकी छन् वा थोरै यदि तपाई आफ्नो पैसा इक्का, एक राजा, वा इक्का-राजाको साथ खेलाडीको बिरूद्धमा प्राप्त गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने। यदि तपाइँलाई पकेट रानीहरूसँग व्यवहार गरियो भने, यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाइँ फ्लपको ठीक अगाडि कार्डहरू खेल्नुहोस्, र प्रत्येक पटक बिभिन्न स्थानहरूबाट उठाइ वा पुनः उठाउँदै।
ऐस-किंग सूट। केहीले यस संयोजनलाई ‘अन्ना कोर्निकोवा’ कम्बोको रूपमा लिनेछ। यद्यपि हेर्दा यो राम्रो छ, यो जोडीले हरेक पल्ट जीत प्रदान गर्दैन। यो संयोजनले अर्का पाकेट जोडीहरू विरुद्ध आधा समय जित्न सक्दछ, जेब राजाहरू र एसेस बाहेक।
पकेट ज्याक यो अझै पनी मनपर्दछ वा तपाईलाई :०:50० मौका प्रदान गर्दछ यदि एक जोडीको हातमा खेल्छ, र अन्य तल्लो पकेट जोडीहरू भन्दा मा बलियो पूर्व फ्लप मनपरी बन्न सक्छ।
पकेट टेन्स यी मजबूत हातहरू मानिन्छ। संयोजन कडा मानीन्छ किनकि तपाइँ अगाडी बढ्न फ्लप मा अर्को दस प्राप्त गर्न आवश्यक छैन। पकेट टेंस पनि अधिकतर overcards बिरुद्ध जीत्न सक्छ धेरै जसो समय, तर त्यहाँ केहि संयोजनहरु छन् जहाँ जेब टेन्स जेब ज्याक भन्दा कमजोर छ।
ऐस-क्वीन सूट। यद्यपि यो एक कमजोर संयोजन मानिन्छ जब अफसूट ऐस-किंगको तुलनामा, पोकरमा अन्य सुरु हुने हातहरू बिरूद्धको सापेक्षिक ताकतको कारण अझै पनि यो राम्रो छ। त्यहाँ उदाहरणहरू छन् जब तपाईं फ्लपमा एक जोडी हिर्काएपछि पनि फोल्ड गर्नुहुनेछ। तर यदि तपाईं फ्लप याद गर्नुभयो भने, तपाईं Ace-क्वीनको साथ आफ्नो घाटा कम गर्न सक्नुहुन्छ।
ऐस-राजा अफसूट। यो एक कमजोर संयोजन हो जब उपयुक्त समकक्षाहरूको बिरूद्ध जोड्दा फ्ल्याश हिट गर्ने सम्भावना कम भएको छ। अझै, यसले तपाईंलाई एसेस वा राजाहरू बाहेक अर्को हातको बिरूद्ध जीतको 40०% मौका दिनेछ।
Ace-Jack Suided । एक्का-रानी र उपयुक्त एक्का-रानी जस्तै, यो हातले शाही फ्लश बनाउन सक्दछ। तर यो जोडी होसियारीपूर्वक खेल्नु पर्छ विशेष गरी यदि खेलाडीले खडा गरिसकेका हुन्छन्। यस संयोजनमा धेरै भर पर्दैन किनभने एक्सेस-राजा वा ऐस-क्वीन कम्बो सजिलैसँग Ace-jack उपयुक्त हराउन सक्छ।
राजा-रानी सूट। यो Ace-Ten उपयुक्त र पकेट 9s भन्दा अलि राम्रो छ, र यसलाई राम्रोसँग फ्लप गर्न मानिन्छ। यस संयोजनको साथ, तपाईं केहि फ्ल्यास र स्ट्रिटको साथ आउन सक्नुहुन्छ, र केवल एक जोडी हिर्काउँदा तपाईंले राम्रो हात पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर तपाइँले हात पगाल्नु पर्छ यदि टेबलमा कार्यले सुझाव दिन्छ कि अन्य खेलाडीहरू बलियो हातले भाँडाको लागि जाँदैछन्।
के खेलमा सबै भन्दा राम्रो हात को रूप मा मानिन्छ?
तपाईं रोयल फ्लसको साथ गलत जान सक्नुहुन्न। यो हात Ace, राजा, रानी, ज्याक र एक १० सबै एकै सूटबाट आउने बनाइएको हो। पोकर खेल्दा तपाईले गर्न सक्ने यो उत्तम सम्भव हात हो। रोयल फ्लस स्ट्रेट फ्लस भन्दा फरक छ किनकि यो क्रममा मिलाइएको छ।
के मेरो रोयल फ्लश कुनै सूट हुन सक्छ?
हो, यो सम्भव छ यो रोयल फ्लश अझै पनि एक समान सूटको साथ आउँछ भन्ने अनुमति दिइएको छ।
रोयल फ्लस स of्कलनमा मेरो के समस्याहरू छन्?
दिईएको छ कि कार्डको एक डेकसँग cards 53 कार्डहरू छन्, सम्भावना कि पहिलो खेलाडीले यस विजयी संयोजनसँग पुरस्कृत हुनेछ 30०, 40 in० मा १।
सिधा फ्लस भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?
पोकरमा, यस हातले पाँच कार्डहरू प्रदान गर्दछ जुन संख्यात्मक रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ, र ती सबै समान सूटबाट आएका हुन्। उदाहरण को लागी, एक सीधा फ्लश एक रानी, जैक र 10 देखि 8 सबै एकै सूट बाट आउने सुविधा हुनेछ। तिनीहरूको मानको सन्दर्भमा, सीधा फ्लश रोयल फ्लशको छेउमा क्रमबद्ध हुन्छ।
पूर्ण घर भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?
यो कम्बो १ 1980 s० को दशकको सिटकममा लोकप्रिय विषय बन्न गएको तथ्यलाई बाहेक, पोकरमा फुल हाउसले समान रैंक वा नम्बरको तीन कार्ड र अर्कोबाट दुईवटा कार्डलाई जनाउँछ। पूर्ण हाउसको उदाहरणमा दुई राजा र तीन छक्का पनि समावेश हुनेछ।
मेरो फ्लसले के गर्छ?
फ्लस कुनै पनि उच्च कार्ड हात, दुई जोडी, एक जोडी, तीन प्रकारको एक प्रकारको, वा सिधा पनि हुन सक्छ। फ्लसले स्ट्रेट फ्लसको बिरूद्ध काम गर्ने छैन, चार प्रकारको एक प्रकारको र पूर्ण घर। अब, यदि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा मा दुई फ्लश हात छन्, फ्लस हात को अन्तिम मूल्य उच्चतम रैंकिंग कार्ड मा आधारित हुनेछ।
पोकरमा कुन सूट सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ?
टेक्सास होल्डममा कुनै पनि सूटलाई उत्तम वा सबैभन्दा मूल्यवान मानिदैन। सबै सूटहरू उस्तै तरीकाले डिजाइन र सिर्जना गरिएको हो, र यिनीहरू समान रूपमा क्रमबद्ध छन्। तर केहि खेलहरू क्लबहरू, हीराहरू, मुटु र कुकुरहरूका साथ सूटहरूको लागि तलबाट उच्चतमसम्मको लागि क्रमबद्ध गर्दछ। केहि खेलहरूमा सूटहरू टाईब्रेकरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पोकर खेल्ने क्रममा हातको श्रेणीकरण कण्ठ गर्नु आवश्यक छ?
होईन, त्यहाँ बिभिन्न हात मूल्यहरू याद गर्न आवश्यक पर्दैन, तर सबै भन्दा राम्रो छ तपाईं बलवान र कमजोर हातहरू बारे सचेत हुनुहुन्छ। यदि सम्भव छ भने, हातको दर्जाको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई नजिक राख्नुहोस्। पोकरको खेल खेल्न यो सजिलो छ यदि तपाईंलाई थाहा छ के हातले हराउन सक्नुहुन्छ।
पोकरको खेल खेल्न कतिवटा कार्डहरू चाहिन्छ?
यदि तपाइँ टेक्सास होल्डम खेल्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ खेल वा दुई होल कार्डहरू र अर्को cards साझा कार्डहरू तालिका वा बोर्डको बीचमा सुरू गर्नुहुन्छ, र ती3राउन्डमा बाहिर निकाल्छन्। Available कार्डहरू उपलब्ध छन्, तपाईं hand कार्ड प्रयोग गरेर उत्तम हात मूल्यको साथ आउँनुहुनेछ। डेक cards२ कार्डको साथ आउँदछ, १ suit कार्डको साथ ड्यूसदेखि एस प्रत्येक सूटबाट।
टेक्सास होल्ड’ममा कसरी कार्डहरू व्यवहार गरिन्छ?
यदि खेल पहिलो पटक खेलिरहेको छ भने, डिलरले तपाईंलाई दुई होल कार्डहरू माना that्कन गर्दछ जुन फेस-डाउनसँगै व्यवहार गरिन्छ। यस पछि, तपाईं पूर्व-फ्लप शर्त राउन्डमा भाग लिनुहुनेछ जहाँ खेलाडीहरूलाई उनीहरूको कार्ड जाँच गर्न, शर्त बनाउन, वा हात मोड्ने मौका दिइन्छ।
त्यसपछि व्यापारीले तीन समुदाय कार्ड फेस-अप टेबल वा बोर्डमा राख्नेछ। यो घटनालाई ‘फ्लप’ भनिन्छ। शर्तको अर्को राउन्ड पछ्याउँदछ, र यस राउन्ड पछि, अर्को कार्ड समुदाय समुदायको सेटमा थपियो। यो ‘मोड’ को रूपमा परिचित छ, र यो बेटि anotherको अर्को सेट द्वारा पछ्याइन्छ।
र अन्तमा, अन्तिम समुदाय कार्ड तालिकामा फेस-अप तोकिएको छ जसले ‘नदी’ सुरू गर्दछ। यस समयमा, खेलाडीहरू त्यसपछि तिनीहरूको उत्तम हात संयोजनको साथ the कार्डहरू प्रयोग गरेर टेबलमा कम्युनिटी कार्डहरू र दुई होल कार्डहरू प्रयोग गर्नेछन्। खेल अब सट्टेबाजीको अन्तिम चरण सुरु हुनेछ, र भाँडो को विजेता निर्णय छ।
जब यो प्रत्यक्ष पोकर गेमको कुरा आउँछ, फ्लप, टर्न, र नदीको लागि कार्डहरूको कारोबार गर्नु अघि, तोकिने डिलरले पहिले बर्न कार्ड डिल गर्नेछ। बर्न कार्ड फेस-डाउनमा व्यवहार गरियो, र यो कार्ड कसैले पनि देख्नु हुँदैन।
पोकर कोठाको सफ्टवेयरले मलाई सूचित गर्दछ यदि मैले भाँडा जित्यो भने?
यो अनलाइन क्यासिनो द्वारा प्रयोग पोकर सफ्टवेयरमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं पोकर वेबसाइटमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यसलाई पहिले नि: शुल्क खेल्नुहुनेछ, त्यसोभए तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि यसले कसरी काम गर्दछ।
पोकरको खेल हातको मूल्यबाट निर्णय गरिन्छ।
बिभिन्न हातहरूले बिभिन्न मानहरू मान्दछन्, त्यसैले यी सबैलाई राम्ररी जान्नु राम्रो हुन्छ।
पोकरको हातमा क्रमशः रोयल फ्लसको साथ उत्तम हातको रूपमा जुन तपाई पोकरको खेलमा बनाउन सक्नुहुन्छ।
जब पोकरमा सब भन्दा राम्रो सुरु हुने हातहरूको कुरा आउँछ, सबैभन्दा राम्रो जोडी पकेट एसेस हो त्यसपछि पकेट किंगहरू।
रोयल फ्लस र स्ट्रेट फ्लस बीच भिन्नता छ।
पोकर ह्यान्ड श्रेणीकरण कण्ठ गर्नु आवश्यक पर्दैन, तर कुन पोकर हातलाई सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ र कुन कमजोर मानिन्छ भनेर जान्न यसले भुक्तान गर्दछ।
पोकरको खेलमा, खेलाडीहरूलाई पहिला २ कार्डहरू व्यवहार गरिन्छ जुन होल कार्डको रूपमा चिनिन्छन्। पोकरको खेलमा त्यहाँ तीन चरणहरू वा चरणहरू छन्, र यसले पालो, फ्लप र नदी समावेश गर्दछ।